မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် Myanmar Democracy Congress: NLD မှ သာကူး မှန်ပြောင်း များကို တောထုတ်ကြပါ
ပြည်သူ၏ ဒုက္ခနှင့် ရင်းနှီးပြီး အစိုးရကို ဖိအားမပေးဖို့ကျွန်ုပ်တို့အကြိမ်ကြိမ်ပြောသည်။ မိမိ၏ နိုင်ငံ ရေးရည်မှန်းချက်ကို သာအဓိကထားသည့် ခေါင်းမာသော နိုင်ငံရေးသမားများက နောက်ဆုံးအချိန်အထိ SANCTIONS ကို ထောက်ခံနေကြ၏။ အစိုးရကို ဖိအားပေးနိုင်သော စကားတွေတွင်တွင်ပြော မှ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ မျက်နှာပန်းလှမည်ဟု ထင်နေကြ၏။ ပြည်သူ့မျက်နှာကို မကြည့်သော ပါတီများအား မဲမထဲ့ကြဖို့ ပြည်သူအား အသိပေးလိုက်ပါသည်။
တော်လှန်သမျှ ပြည်သူ့အတွက် မဟုတ်ပဲ တော်လှန်သူများ နာမည်ကောင်းရရှိရေးသာလျှင်ဖြစ်နေ၏။ မိမိ ကိုယ်ပိုင် အရည်အချည်း မရှိပဲ လူကြီးတွေနဲ့တည့်အောင်ပေါင်းပြီး အမတ်လုပ်မည့်သူများကို ဆန့်ကျင် ကြပါရန် ကျွန်ုပ်တို့ပါတီမှ ရဲဝံ့စွာတင်ပြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ NLD နှင့် ပတ်သက်၍ ဝေဖန်မှုပြုတိုင်း လူအများ က NLD အားမဝေဖန်ရန် တိုက်တွန်းကြ၏။(သို့) ချိန်းချောက်ကြသည်။ အမှန်တော့ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ် အဖို့ အခြားသော ပါတီကိုဝေဖန်ရခြင်း ဆိုသည်မှာ တာဝန်တစ်ရပ်သာဖြစ်၏။
စီးပွားပိတ်ဆို့မှုကို ထောက်ခံ၍ ပြည်သူကို ငွေလှုနေသော ပါတီတစ်ရပ်၏ လုပ်ရပ်ကို လက်ပိုက်ကြည့်နေ လို့ ဘယ်နည်း နှင့်မှ မဖြစ်နိုင်ပါ။
မ - ဆ - လ ခေတ်ဆိုးက သင်ကြားပေးလိုက်သည့် လူကြီးတွေနှင့် တဲ့အောင်ပေါင်းတတ် သော ၊ မလုပ် မရှုပ် မပြုတ် နေ တတ်သော၊ သာကူး မှန်ပြောင်းစိတ်ဓါတ်များ ဖြင့် မောင် ဖြိုးမင်းသိန်း အပါ အ၀င် ဖြစ်သော လူငယ် တစ်သိုက် အာဏာရကြပေဦးမည်။ ဖြိုးမင်းသိန်း ၂၀၁၀ တွင်ပါတီဥက္ကဌ လုပ်ပြီးမှ ရွေးကောက်ပွဲ မှာ တရားမျှတ မှု မရှိနိုင်ဟူသောဆင်ခြေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကို ကျောခိုင်းပြီး ဦးဝင်းတင်ကို သစ္စာခံသော စကားများ RFA မှ ပြောခဲ့သည်။ အမှန်တော့ ယခုကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုသည်မှာလည်း တရားမျှတမှု စံချိန်စံညွှန်းမှာ ယခုချိန် အထိ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအခြေအနေနှင့် အတူတူသာလျှင်ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တော့ နိုင်ဖို့မသေချာ၍ ၂၀၁၀ ကို ကြောခိုင်းခဲ့ခြင်းသာလျှင်ဖြစ်၏။
အခုတော့ NLD မှဝင်ပြိုင်သဖြင့် နိုင်ဖို့သေချာ သလောက်ရှိပြီဟု မောင်ဖြိုးမင်းသိန်း ထင်နေပုံရသည်။ တကယ် သတ္တိရှိ၍ သစ္စာမှန်လျှင် မိမိကိုယ်တိုင်ဥက္ကဌ လုပ်ခဲ့သောပါတီ မှသာ ပြန်လည် အရွေးခံသင့်သည်။ သာကူး မှန်ပြောင်း စိတ်ဓါတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ သာ NLD မှ ၀င်ပြိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ကို အားလုံးသိပါသည်။ NLD အနေဖြင့်လည်း သာကူးမှန်ပြောင်း များကိုလက်ခံခြင်းဖြင့် သာကူးမှန်ပြောင်း ပါတီတစ်ရပ်သာဖြစ်နိုင်ပါ သည်။
၂၀၁၀ ကိုကြောခိုင်းလိုက်တုန်းက ပြောသော ရွေးကောက်ပွဲကို မယုံကြည်သည့် စကားများ ပြောပါဦးဟု မောင်ဖြိုးမင်းသိန်း အား တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။ မောင်ဖြိုးမင်းသိန်း နှင့် သာကူးတစ်သိုက်အာဏာရလျှင် မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲအတွင်း ပထမဆုံး အာဏာရလာသော သာကူး မှန်ပြောင်းတစ်သိုက် အဖြစ် သမိုင်းတင်ရမည်ဖြစ်ပေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ပါတီမှ ဦးကောင်းမြင့်ထွဋ်က NLD အပါအ၀င် အားလုံးက ဖိနှပ်နေသည့် ကြားမှ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ရဲဝံ့စွာ အရွေးခံခဲ့၏။ စစ်အာဏာရှင် တစ်သိုက်၏ မဲသမာမှုကို ပြောင်မြောက်စွာဖေါ်ထုပ်ခဲ့ သည်။ တောင်ဥက္ကလာမဲဆန္ဒ ရှင်များ က သူတို့ မြို့တော်ဝန်ဟောင်း ဦးအောင်သိန်းလင်းကို မဲမထဲ့ခဲ့ပါ ကောင်း မြင့်ထွဋ်ကို သာ မဲထဲ့ခဲ့ပါသည်ဟု ယခုတိုင် တစ်သသ ပြော နေဆဲဖြစ်၏။
ဦးကောင်းမြင့်ထွဋ်က ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဦးအောင်သိန်းလင်း အားရှုံးနိမ့်ပါသည်ဟု ၀န်ခံ လက်မှတ် ထိုးရန် ငြင်းဆန်ခဲ့၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရဲဝံ့စွာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မှု များက စစ်အာဏာရှင်တစ်သိုက်အား မဲမသမာ သူများအဖြစ် ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် ထင်ရှားစေခဲ့၏။
ရွေးကောက်ပွဲဝင် နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းတစ်လမ်းသာ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် တစ်ခုတည်းသော အဓိက နည်းလမ်းဖြစ်သည်ဟု NLD မှ လူသိရှင်ငြားခေါင်း ဆောင်များကို ဆန့်ကျင်၍ ပြည်သူအတွက် ရဲဝံ့စွာ တင်ပြ ခဲ့၏။
ယခုကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဦးကောင်းမြင့်ထွဋ် သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ မဟာမိတ်ဖြစ်သော MYANMAR NATIONAL CONGRESS မှ ၀င်ရောက်အရွေးခံမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲဝင် နိုင်ငံရေးကို ရဲဝံ့စွာ၊ ရိုးသား စွာ၊ အသိဥာဏ်ကြီးစွာဖြင့် ပ-ထ-မ ဆုံးတင်ပြခဲ့သော ဦးကောင်းမြင့်ထွဋ် အနိုင်ရခြင်း က NLD မှ သာကူးများထက် များစွာတန် ဖိုးရှိကြောင်းတင်ပြလိုသည်။
တိုင်းပြည်အတွက် အမှန်တကယ် အလုပ်လုပ်ခဲ့သော ခေါင်းဆောင်များကို ရွေးချယ်ကြပါ။ သာကူးမှန်ပြောင်း များကို တောထုတ်ကြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မဟာမိတ်ပါတီခေါင်းတောင် ဦးကောင်းမြင့်ထွဋ် ကို မဲထဲ့ကြပါ။ သာကူးမှန်ပြောင်းတွေဟာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရှုံးရင် အိမ်ပြန်အိပ်ပြီး မိမိ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ စီးပွားရေး လူမှုရေး လုပ်ငန်းများ သာပြန်လုပ်ကြမှာပါ။ ဦးကောင်းမြင့်ထွဋ်ဟာ ၁၉၈၈ ကထဲက ယနေကအထိ မရပ်မနား တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်လုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ တရားမျှတစွာ နဲ့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ယှဉ်ပြိုင်သွားမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မှာ အနိုင်မရခဲ့လည်း တိုင်းရေးပြည်ရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သာကူး မှန်ပြောင်း တွေလို မနိုင်လို့ ဘေးထွက်ထိုင်နေ မယ့်သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ မဟာမိတ်ပါတီဖြစ်တဲ့ MYANMAR NATIONAL CONGRESS ရဲ့ခေါင်းဆောင်များကို မဲထဲ့ကြပါ။ သာကူး မှန်ပြောင်း အချောင်သမားများကို တောထုတ်ကြပါ။
Saul Loeb/AP - Myanmar President Thein Sein, right, shakes hands with U.S. Secretary of State Hillary Clinton.
By William Wan, Friday, January 20, 1:00 AM
The exclusive interview with Thein Sein — conducted Tuesday at his ornate presidential office in Naypyidaw by Lally Weymouth, senior associate editor for The Washington Post — offeredarare glimpse into Burma’s reclusive leadership and the soft-spoken, bespectacled former general at its head.
He said his government already had complied with several Western demands — including freeing most political prisoners, scheduling elections in April and allowing opposition leader Aung San Suu Kyi,aNobel Peace Prize laureate, to potentially join the government asamember of parliament. He did not rule out the possibility that, some day, she may even join the cabinet.
Known through history for its bounty of natural resources such as gold, natural gas and lumber, Burma now lags far behind most of its Asian peers in poverty rates, education levels and infrastructure. It has been ravaged by decades of civil war, corruption, brutal rule byasuccession of military leaders and bloody repression of democracy activists.
Many critics of the government say sanctions have playedarole in spurring political reforms within Burma and its unexpectedly warm outreach to the West in recent months.
Burma’s accelerating reforms have been embraced by the Obama administration. In November, Secretary of State Hillary Rodham Clinton visited Burma, the first such visit there since the military took over the government in 1962. Last week, Obama announced he would appoint an ambassador to restore diplomatic ties with Burma, also known as Myanmar.
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 6:08 PM